အမည်မည်း(Black list) စာရင်းသွင်းခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို ပယ်ဖျက် | MoeMaKa Burmese News & Media
>Burma releases prominent dissident Zarganar: family
>Cartoon Zaw DD - The definition of Burmese Regime's Flag
>number of muslim pilgram to macca
>ဧကစာခဵြိ - ကာတနြ်း - မအအောင် သင်တာ ဘာလဲ
အမည်မည်း(Black list) စာရင်းသွင်းခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို ပယ်ဖျက်
သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၂၊
( မူရင်း၊ Yangon Press International )
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား စုစုပေါင်း ၆၁၆၅ ဦးကို အမည်မည်း (black list) စာရင်းသွင်းထားခဲ့ရာမှ ယင်းတို့အနက်၂၀၈၂ ဦးအား ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနမှ ယနေ့ နံနက် သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အတွက် နိုင်ငံရေး၊ သတင်းမီဒီယာနှင့် စီးပွားရေး စသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အမည်မည်း စာရင်းသွင်းထားရာမှ ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင် ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်သူများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာရန် ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဟု ဖေါ်ပြပါရှိကာ မည်သူမည်ဝါ ပါဝင်သည်ဆိုသည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
နိုင်ငံရေး လုပ်ရှားခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် ကိုတင်နိုင်ထွန်းက “ ကျွန်တော့်နာမည် အမည်မည်း စာရင်းထဲ ပါသလား မပါလားတော့ မသိဘူး၊ တကယ်လို့ ပါတယ်ဆိုရင်လည်း တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို အမည်မည်း စာရင်းထဲ မသွင်းသင့်တာပါ၊ အခုပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာရတာပေါ့ ” ဟု ဆိုသည်။
လာမည့် စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့တွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံအဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့သူ ၈၈ အရေးအခင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ မိုးသီးဇွန်နှင့် အခြား အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး သမား ၆ဦး တို့ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ယခုကြေညာချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေး အကြောင်းဖြင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ပြည်ပြေး ကြေညာခြင်း ခံထားရသူ မသန္တာက မူ “အခုလိုကြေညာတာ မတရားဘူးလို့ ထင်တယ်။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာတော့ ငွေကြေး အလွဲသုံးစား၊ လိမ်လည်တာကြောင့် အမည်မည်း စာရင်းသွင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံပေမယ့် နိုင်ငံရေး သမားမှာ အမည်မည်းဆိုတဲ့ စကားလုံး မရှိသင့်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီ ကိုသွားနေတဲ့ဆိုတဲ့ ဒီနေ့လိုကာလမှာ အကုန်ပြန်ဝင်ဖို့ သမ္မတကြီးက ဖိတ်ထားပြီပဲ၊ အခုလို ၂၀၀၀ ကျော်ကို ဖျက်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုး ကို နားမလည်နိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ၂၀၁၀ ခုနှစ်လည် မိန့်ခွန်းတွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် တစုံတယောက်ကို နစ်နာစေသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်း မရှိပါက ပြန်လာနိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ။
4 Responses to အမည်မည်း(Black list) စာရင်းသွင်းခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀၀၀ ကျော်ကို ပယ်ဖျက်
စိန် on August 28, 2012 at 6:40 pm
အမဲစာရင်း ( စာရင်းမဲ )လို့ လုပ်စမ်းပါဟာ
maung on August 28, 2012 at 7:27 pm
Black list ကို အမည်မည်း လို့ဘာသာပြန်တာထက် နာမည်ပျက်လို့ဘာသာပြန်ရင် သင့်တော်မလားလို့…
Thet Thet on August 28, 2012 at 10:30 pm
Very bad translation. There arealot of words that cannot be translated directly. That shows that whoever translated the topic of the article does not know Burmese well.
Aung Pe Khin(New Zealand) on August 30, 2012 at 3:10 am
Burmese Newly Government is very carefully implement their strategy and policy. President Thein Sein is understanding about what will west group want. Especially United State/ European. Also Asean as well. Must open to all for politician. Should not keep blacklist.